बेलायतमा बस्दै आएकी इशा गुरुङले धरान उपमहानगरपालिकालाई गरि यति ठुलो सहयोग… – Ap Nepal
बेलायतमा बस्दै आएकी इशा गुरुङले धरान उपमहानगरपालिकालाई गरि यति ठुलो सहयोग…
काठमाडौँ — बेलायतमा बस्दै आएकी इशा गुरुङले धरान उपमहानगरपालिकालाई एक लाख बराबरको डस्टबिन सहयोग गरेकी छिन् । हर्क साम्पाङ जस्ता इमानदार र जनताप्रती जिम्मेवार मेयरलाई सबैतिरबाट सहयोग हुनुपर्नेमा इशा गुरुङ जोड दिन्छिन् ।
लामो समय देखि गुरुङ बेलायतमा बस्दै आएकी छिन् । देशका विभिन्न ठाँउमा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म समस्या परेका मानिस र तप्कालाई सहयोग गर्दै आएकी गुरुङ सामाजिक संजालमा पनि चर्चामा रहनेगर्छिन् ।
केही दिन अगाडि मात्र गुरुङले सुर्खेतको एक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुलाई कपिकलम समेत वितरण गरेकी थिइन् । गुरुङको समाजसेवी भावनाका कारण देशभर जहाँ समस्या पर्छ त्यहाँ इशालाई सम्झिन्छ्न । कास्की जिल्लामा जन्मिएकी गुरुङ आज समाजसेवीका रूपमा देश बिदेशमा चर्चित छन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले नेपाल सरकारले तोकेका विशिष्ट व्यक्तिको हेलिकप्टर उडानमा अबदेखि अनिवार्य रुपमा दुई जना पाइलट राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । संस्कृित, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको अध्यक्षतामा आइतबार साँझ बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको आन्तरिक उडानमा रहेका हेलिकप्टरलाई अबका दिन विशिष्ट व्यक्तिको उडानमा अनिवार्य दुईजना पाइलट राख्नुपर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
यसैगरी प्राधिकरणले स्वचालित प्रणालीले तोके बमोजिम दुई जना पाइलट राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था समेत गरेको छ । हाल नेपालमा १० वटा निजी र नेपाल सरकारको एक गरी ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनी छन् । प्राधिकरणले काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाजको पार्किङ क्षमता भरिएकाले काठमाडौँ बाहिर हेलिकप्टर र जहाजलाई सार्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
हवाई जहाज सञ्चालक कम्पनीले यही असार १३ देखि तोकिएका आधार विमानस्थलमा जहाज पार्किङ गर्नुपर्ने जनाएको छ । यसैगरी हेलिकप्टरले पनि यही असार ७ गतेदेखि तोकिएका काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थलमा आफ्नो रात्रि बिसान गरी पहिलो उडान ती विमानस्थलबाटै अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
Prevह्वात्तै बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य , पेट्रोल लिटरमै यति महंगो…
Nextफेरि बढ्यो गाडी भाडा, कहाँ जान कति लाग्छ ? हेर्नुहोस् .
आज बिहिबार ह्वात्तै बढ्यो डलर सहित यी बिदेशी मुद्राको भाउ.
नायक पल र नाबालिका गायिकाको बारेमा बोलिन गायिका ज्योति मगर, यस्तो खोलिन भित्रि कुरा